UNODC မှ ထောက်ပံ့ကူညီသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘိန်းအစားထိုး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ထုတ်ကုန်ကော်ဖီကိ? - Yangon Media Group
UNODC မှ ထောက်ပံ့ကူညီသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘိန်းအစားထိုး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ထုတ်ကုန်ကော်ဖီကိ?
ပဲရစ်၊ မတ် ၂၂
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှိန်အဟုန် မြင့်မားစွာကြီးထွား လာသော ကော်ဖီကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း ၏အရေးကြီးသော အရွေ့တစ်ခုတွင် UNODC နှင့် ပြင်သစ်ကော်ဖီကုမ္ပဏီ(Malongo) တို့ပူးပေါင်း၍ ရှမ်း တောင်တန်းဒေသထွက် အရည်အ သွေးမြင့် ကော်ဖီအမှတ်တံဆိပ်အသစ် တစ်ခုကို မတ် ၂၂ရက်က ပြင်သစ် ပါလီမန်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးသော ရှမ်းတောင် တန်းဒေသထွက် ကော်ဖီ အရသာ မြည်းစမ်းခြင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြ ခြင်းကို ပါလီမန်ရှိသမ္မတခန်းမဆောင်တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး President of the National Assembly Richard Ferrand နှင့် အခြားထင်ရှားသည့် ဧည့်သည်တော် ဆယ့်နှစ်ယောက် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ရှမ်းတောင်တန်းဒေသထွက် ကော်ဖီဖွင့်လှစ်ရောင်းချခြင်းကို ပဲရစ် မြို့နှင့် နိုက်စ်မြို့ရှိ Malongo အ ရောင်းဆိုင်များတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရှမ်းတောင်တန်းဒေသထွက် ကော်ဖီသည် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှိ ပဋိပက္ခများလွှမ်းမိုးခဲ့သော ရှမ်း ပြည်နယ်၏ ဒေသထွက်အရင်းအမြစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘိန်းထုတ် လုပ်ရောင်းချမှု အများဆုံးနိုင်ငံစာရင်းတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံပြီး လျှင် ဒုတိယမြောက်အများဆုံးဖြစ် သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၉ဝရာခိုင်နှုန်း သောဘိန်းကို ရှမ်းပြည်နယ်မှထွက် ရှိသည်။ ရှမ်းတောင်တန်းဒေသထွက် ကော်ဖီသည် UNODC မှထောက်ပံ့ ကူညီပေးထားသော ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ တောင်သူ ၁ဝဝဝ ခန့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် Green Gold သမဝါ ယမအသင်းမှ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုတောင်သူ ၁ဝဝဝခန့် မှာ လွန်ခဲ့သောကာလကဘိန်းစိုက် တောင်သူများဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ Green Gold သမဝါယမအသင်း၊ Malongo ပြင်သစ်ကော်ဖီကုမ္ပဏီနှင့် UNODC တို့ကြားရှိ မဟာဗျူဟာ ကျကျ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ထိပ်တန်းဘိန်းစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သည့်နေရာများမှ တစ်ခု ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တိုး တက်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရေရှည်တည်တံ့စေရေး ဖော်ဆောင် ရာတွင် အဓိကသော့ချက်တစ်ခုဖြစ် သည်။
”UNODC အနေနဲ့ ပြင်သစ် ဈေးကွက်မှာ အာမခံချက်အပြည့် ရှိ ကော်ဖီထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သစ်တစ်ခုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်လှုပ် ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ် ငန်းတစ်ခုမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအ နေနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အ တွက်များစွာဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီလုပ် ငန်းကဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘိန်း ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ကျစေပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ UNODC Country Manager ဖြစ်သူ Mr. Troels Vester မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ”ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါလီမန်မှာကျင်းပတဲ့ အရသာမြည်း စမ်းတဲ့ပွဲမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် အကဲဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် ရှမ်းတောင် တန်းဒေသထွက် ကော်ဖီထုတ်ကုန် ဟာ အခုအခါ ဥရောပနိုင်ငံထုတ် ကော်ဖီအဖြစ် တံဆိပ်ကပ်နိုင်ပြီဖြစ် တယ်။ ဒါကြောင့် ဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်း မှ အခြားသောသီးနှံများ ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် အခြားတောင် သူများကိုလည်း အားကျအတုယူ စေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကော်ဖီထုတ်လုပ်သည့် နေရာတစ်ခု အဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာဖြစ်ထွန်းလာစေရန် အတွက် UNODC ၏ရေရှည်တည် တံ့ခိုင်မြဲသော အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းမှသော်လည်းကောင်း အဓိက အလှူရှင်များဖြစ်ကြသည့် ဖင်လန် နှင့် ဂျာမနီအစိုးရတို့က ငွေကြေး အရသော်လည်းကောင်း ဆွစ်ဇာလန် အဖွဲ့အစည်းမှ သမဝါယမအသင်း အား အခြားလိုအပ်သည့်အရင်းအမြစ် များဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးလျှက်ရှိသည်။ ”Malongo က စီးပွားရေးလုပ် ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ ဒီလိုစီမံကိန်းမှာ ပါဝင်ခြင်း က ကော်ဖီထုတ်လုပ်သူတွေကို ကူညီ ပေးတဲ့ မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်း အနေနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက စီးပွား ရေးတစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန် တော်တို့အနေနဲ့ စီးပွားရေးကွင်းဆက် မှာပါဝင်တဲ့သူတွေအတွက် အရည် အသွေးမြှင့်ပေးတဲ့ အခြားသောစီး ပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်း လုပ် ဆောင်လိုပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူတွေ က သူတို့ရဲ့အလုပ်မှာ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိရှိနေနိုင်တဲ့စီးပွားရေးမျိုး၊ ဝယ်ယူ သုံးစွဲသူများမှ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း ကျေနပ်မှုရှိစေတဲ့ စီးပွားရေးမျိုးလုပ် ဆောင်လိုပါတယ်”ဟု Malongo ကော်ဖီကုမ္ပဏီမှ အထွေအထွေညွှန် ကြားရေးမှူး Jean-Pierre Blanc မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
Green Gold သမဝါယမအ သင်းသည် အစားထိုးဖွံ့ဖြိုးရေးထုတ် ကုန်ကော်ဖီအဖြစ် ဈေးကွက်တွင်း ရောက်ရှိရန်အတွက် Malongo ပြင် သစ်ကော်ဖီကုမ္ပဏီနှင့် ၂ဝ၁၇ခုနှစ် တွင်စတင်ပြီး အကျိုးတူ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ငါးနှစ်တာအ ကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း သဘောတူညီမှုအရ Malongo သည် ကော်ဖီစိုက်တောင်သူ တစ်ထောင် ကျော်ထံမှ တစ်နှစ်လျှင် ကော်ဖီတန် ပေါင်း ၆ဝဝ ထိဝယ်ယူသွားမည်ဖြစ် သည်။
အမေရိကန်၏ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးတူဆွေးနွေးရန် တောင်းဆိုမှုကို ပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင်အဖွဲ??
ပြည်ပတွင် လနှင့်ချီကာ လေ့ကျင့်နေသည့် MMA နာမည်ကြီး ကစားသမား ဖိုးသော်ကို လုံးဝ ကြောက်ရွံ့ခြင်